“अरुले हल्ला गरिरहेका छन्, मैले जनतासंग सल्लाह गरिरहेको छु, जीत मेरै हो”: भण्डारी(video) – Online Annapurna
“अरुले हल्ला गरिरहेका छन्, मैले जनतासंग सल्लाह गरिरहेको छु, जीत मेरै हो”: भण्डारी(video)
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार ०५:१४ November 11, 2019 346 Views
आरजू विष्ट सल्यानी/पोखरा, कात्तिक २५
मंंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं २ को लागि कास्कीमा दलहरुले आफ्नो चुनावि अभियानलाई तिब्र बनाएका छन् । यतिबेला उनिहरुले घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
rpp leader rom bdr bhandari:aarju
राप्रपा कास्कीका उम्मेदवार रोमबहादुर भण्डारीले मतदाताका घरघरमा पुग्दा भित्रभित्र तपाँईलाई रोजेको सुनाउँदा जितको लागि आफु विश्वस्त भएको दावि गर्नुभएको छ । भोट माग्ने बेलामा पनि आउने होईन भण्डारीले भन्नुभयो :“जनताले पछि पनि आउनु पर्छ भनेका छन्, अरुले हल्ला गरिरहेका छन्, तपाँई सल्लाह गर्न आउनु भएको छ भनेका छन, म आशावादी भएको छु ।”
अहिलेका मतदाताले धेरै कुरा बुझेका रहेछन्, दुई तिहाईको कम्यूनिष्टको सरकार बन्यो, केके न गर्छन् भनेका खै के दिए त ? नेताहरुले आफ्नो गोजिमा राख्ने काम गरे, जनतालाई सुख्खा बनाउने र महंगि वढाउने काम गरे, अर्कोतर्फ बिपक्षि नेपाली कांग्रेसले राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको बेला हामी जनतामाझ पुगेका छौं ।”
भण्डारीले सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाईरहेको, भ्रष्टाचार भईरहेको, केन्द्र्रीय नेताहरु मिलेर खाईरहने धन्दा गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो :“वाईडबढि प्रकरणमा महालेखा परिक्षकबाट ४ अर्ब ५७ करोड को प्रतिवेदन आयो तर कारबाहि भएन, त्यत्रो प्रतिवेदन निकाल्दा कारबाहि हुनुपर्यो नि, भ्रष्टाचार गरीएको होईन भने जनतामा किन होईन भनेर भन्न सक्दैनन् ?”
अर्को प्रसंगमा भण्डारीले पार्टीले उठाईरहेको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको कुरालाई नछोडेको बताउनु भयो । साथै उहाँले हामीले चाहेको राजा संवैधानिक हो, पहिजाको जस्तो प्रत्येक्ष शासन गर्ने जस्तो नभएको बताउनु भयो । “राजाले कसैलाई पक्षपात गर्र्दैनन्, यो सत्य हो,भण्डारीले भन्नु्भयो :“नेपाललाई संवैधानिक राजा र हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ ।” साथै उहाँले अहिले देशमा धर्मको नाममा भित्रभित्र विभिन्न छलखेल भईरहेको बताउनु भयो ।
भण्डारीले चुनावमा झुट्टा एजेण्डा बाँडेर नभएको दावि गर्दै जितेको खण्डमा जनतासंग सल्लाह गरेर आवस्यक्ता अनुसार विकास निर्माणका योजना ल्याउने बताउनु भयो । संघियता नेपालमा नखप्ने बताउँदै भन्नुभयो :“यो धेरै खर्चिलो भयो, उहिले २८ जनाले देश चलाएका थिए, अहिले घरैपिच्छे मन्त्री, मन्त्रीहरु दुई करोडको गाडीमा हुँईकिन थाले, पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरेको देखिएन ।”
२०२८ सालमा प्रधानपञ्चमा विजयी भएदेखि राजनीतिमा संलग्न हुँदै आएका भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनु भयो । भण्डारीसंग ३८ सालमा वडा अध्यक्ष भएर काम गरेको, २०४९ सालमा मेयरको उम्मेदवार भएको, २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हारेको पनि अनुभव रहेको छ ।
के तपाँईले चुनाव जित्नुहुन्छ त ? रेडियो अन्नपूर्णले प्रश्न गर्दा भण्डारीले हाँस्दै भन्नुभयो :“यस पटक त मलाई जनताले सुटुक्क भोट दिन्छन् किनभने म दिनका लागि आएको छु, लिनका लागि होईन ।”